Articles tagged 'godfrey chidyausiku'
Chidyausiku's son in out-of-court deal 11 August 2017 HARARE - The late retired chief justice Godfrey Chidyausiku's son Tadzimirwa has made an out-of-court settlement with a woman who accused him of fondling her bum, leading to the withdrawal of his criminal case at the Harare Magistrates' Courts yesterday. Tadzimirwa Bernard Chidyausiku, 28, was...
Zanu PF escalates push to amend new Constitution 1 August 2017 HARARE - President Robert Mugabe's Zanu PF will again use its two-thirds parliamentary majority to approve more constitutional amendments giving back wide-sweeping powers to the president, Vice President Emmerson Mnangagwa has said. The changes come at the expense of MPs' rights to oversee the...
Chidyausiku's son in court over pub drama 26 July 2017 HARARE - The son of the late retired Chief Justice Godfrey Chidyausiku — Tadzimirwa — yesterday appeared in court for allegedly fondling a married woman's butt at a popular pub and grill in Harare on Sunday. Tadzimirwa Bernard Chidyausiku, 28, was bandaged on the forehead when he appeared befo...
'We told Chidyausiku to defy land seizure rulings' 9 May 2017 HARARE - President Robert Mugabe has confessed to giving the late retired Chief Justice Godfrey Chidyausiku unconstitutional Executive orders to okay the seizure of white-owned farms. Commenting on the tenure of Chidyausiku — who has been declared a national hero and is set to be interred at t...
CJ case takes new twist 24 February 2017 HARARE - The University of Zimbabwe student, Romeo Zibani, who recently lost a bid to stop the conducting of interviews to replace Chief Justice Godfrey Chidyausiku, has filed another court application challenging the composition of the bench that dismissed his request. The 25-year-old lost th...
Harare rejects CJ law changes 18 February 2017 HARARE - Zanu PF's plans to amend the Constitution were overwhelmingly rejected yesterday as civil society and members of the public in Harare ganged up against the proposed Constitution of Zimbabwe Amendment (No1) Bill. The Bill seeks to restore sweeping powers to President Robert Mugabe to a...
'New Constitution spurred increased litigation' 20 January 2017 HARARE - THE adoption of the 2013 Constitution into law, replacing a 33-year-old document forged in the dying days of British colonial rule, spurred a batch of petitions challenging the constitutional validity of several subsidiary legislation, outgoing Chief Justice (CJ) Godfrey Chidyausiku has ...
Courts crisis 13 December 2016 HARARE - The hunt for Zimbabwe's new chief justice was hit by more turbulence yesterday when one of the candidates who was set to be interviewed by the Judicial Services Commission (JSC), Justice George Chiweshe, surprisingly failed to turn up, amid heated debate about the constitutional ramifica...
JSC seeks new chief justice 19 October 2016 HARARE - The Judicial Service Commission (JSC) has begun the hunt for a new chief justice to replace retiring Godfrey Chidyausiku. Chidyausiku retires next year and his successor is set to begin his or her term of office on March 1, 2017. “The JSC announces that a vacancy of chief justice o...
Con-Court outlaws criminal defamation 4 February 2016 HARARE - In a far-reaching ruling, the Constitutional Court yesterday quashed once and for all the country's notorious criminal defamation law, saying the statute was invalid even under Zimbabwe's new Constitution. This followed an application by the Zimbabwe chapter of the Media Institute of ...
Tomana receives 30-day jail term 29 October 2015 HARARE - Prosecutor-General Johannes Tomana has been slapped with a 30-day jail sentence by the Constitutional Court for defying orders by the courts to authorise the private prosecution of rape-accused Zanu PF legislator Munyaradzi Kereke and businesswoman Jane Mutasa. Fortunately for Tomana ...
ZNCC upholds Supreme Court rulings 30 July 2015 HARARE – The Zimbabwe National Chamber of Commerce (ZNCC) says the recent Supreme Court labour rulings will help revive struggling companies operating under the current harsh economic environment. ZNCC chief executive Christopher Mugaga on Tuesday told journalists in the capital that while the...
Form your own party, court tells Bhasikiti 18 July 2015 HARARE - Chief Justice Godfrey Chidyausiku yesterday advised expelled Zanu PF legislator Kudakwashe Bhasikiti to form his own party, as the court could not mend a “broken marriage”. As soon as Chidyausiku said this, the former Mwenezi East Member of Parliament had no option but to withdraw his...
Mutasa 1, Mugabe 0 18 March 2015 HARARE - Chief Justice Godfrey Chidyausiku has ruled that former presidential affairs minister Didymus Mutasa's application challenging his recent expulsion from Parliament should be heard on an urgent basis. Mutasa filed the application together with his nephew Temba Mliswa, following the duo...